Read more about (ခ)-နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်းဖောက်ဖျက်သည့် ယာဉ်များကို အရေးယူ ဆောင်ရွက်ရာတွင်လွယ်ကူချော့မွေ့လျင်မြန်စေရန်နှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစေရန်(Digital Payment System)ဖြင့် ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ရန်အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
လက်ရှိအခြေအနေအရမိမိတို့နိုင်ငံတွင် မော်တော်ဆိုင်ကယ်နှင့်မော်တော်ကားအသုံးပြုမှုနှုန်းထားများ တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်များပြားလာပြီဖြစ်ပါကြောင်း၊ ထိုနည်းတူ ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်းဖောက်ဖျက်သည့်ယာဉ်များ၊ မှုခင်းဖြစ်ပွားသည့်ယာဉ်များလည်း နေ့စဉ်နှင့်အမျှ မြင်တွေ့ကြားသိနေရပါကြောင်း၊ မြို့ကြီးများတွင် နေ့စဉ်ရာဂဏန်း၊
Read more about (ဂ)-နှစ်ပေါင်း(၉၀)ကျော်သက်တမ်းရှိသည့်ဧရာဝတီမြစ်ကူးတံတားဖြစ်သော စစ်ကိုင်းတံတား(အင်းဝ)အားဆေးအသစ်သုတ်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနှင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကို မီးရထားလမ်း၊ ကားလမ်းဆက်သွယ်ပေါင်းကူးပေးထားသည့် ဧရာဝတီမြစ်ကူးစစ်ကိုင်းတံတား(အင်းဝ)ကို ၁၉၂၇ ခုနှစ်တွင် အင်္ဂလိပ်အစိုးရ မြန်မာနိုင်ငံ၏ဘုရင်ခံ Sir. Harcourt Butler ကအုတ်မြစ်ချခဲ့သည်ဟု သိရပါကြောင်း၊ ၁၉၃၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂ ရက်နေ့တွင် ဘုရင်ခံ Sir.
Read more about (စ)-ငပုတောမြို့၊ ဈေးတံတားဆိပ်ကမ်းတွင် ခရီးသွားပြည်သူများနှင့် ရေယာဉ်များဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းစွာဆိုက်ကပ်နိုင်ရန်ဆိပ်ခံဘောတစ်စင်းကိုမည်သို့ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးမည်ကို သိလိုခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း သည့်မေးခွန်း
Read more about (င)-တွံတေး တူးမြောင်းပိုင်မြေများအား ရေအရင်းအမြစ်နှင့် မြစ်ချောင်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနက စီမံခန့်ခွဲဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများနှင့် တိကျရှင်းလင်းသော မူဝါဒများ ချမှတ် ပေးနိုင်ခြင်း ရှိ/မရှိတို့ကို သိရှိလိုခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း
(က)-မြန်မာနိုင်ငံ စက်မှုဇုန်ကားလုပ်ငန်းများ၊စက်မှု ဇုန်ထုတ်ကားများ နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း
Read more about (က)-မြန်မာနိုင်ငံ စက်မှုဇုန်ကားလုပ်ငန်းများ၊စက်မှု ဇုန်ထုတ်ကားများ နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း
မိမိအနေဖြင့် ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန(ကညန)ဝန်ထမ်းများနှင့် စက်မှုဇုန်ကား ထုတ်လုပ်သူများ ပူးပေါင်းပြီး မသမာလုပ်ဆောင်မှုများကြောင့် နိုင်ငံတော်အခွန်ငွေ နစ်နာမှု
Subscribe to ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန